Faah faahin:- Maxamed Isaaq Tubane oo lagu dhaawacay degmada Dharkenley ee Muqdisho – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Faah faahin:- Maxamed Isaaq Tubane oo lagu dhaawacay degmada Dharkenley ee Muqdisho
Faah faahin dheeraad ah ayaa laga heleyaa koox hubeysan oo habeenkii xalay dhaawac culus u geystay mid ka mid ah ergadii dhawaan xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya kusoo dooratay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay.
Ninka la dhaawacay oo lagu magacaabo Maxamed Isaaq Tubane ayaa xilligii la weerarayay wuxuu kusii jeeday gurigiisa ku yaalla degmada Dharkenley ee magaalada Muqdisho.
Maxamed Isaaq Tubane ayaa la sheegayaa inay rasaastu ka haleeshay qeybaha kore ee jirkiisa, waxaana markii dambe usoo gurmaday dadka deegaanka oo dhaawaciisa ula cararay Isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho.
Kooxihii falkaasi ka dambeeyaay ayaa islamarkiiba goobta isaga baxsaday, iyadoona illaa iyo haatan aan la ogeyn cidda ay kooxdaasi ka tirsan yihiin.
Tan iyo markii la doortay madaxweyne Farmaajo waxaa magaalada Muqdisho kusoo kordhay dilalka iyo qaraxyada loo geysanaayo nabadoonada, dadka shacabka ah iyo mas’uuliyiinta ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya, iyadoona dhowr jeer hore ay magaalada uga dhaceen falal lidi ku ah ammaanka magaalada.